Ventilator aan dulqaad lahayn
Dhowr haamood oo neefsashada hawo-mareenada aan weerarin
waxaa maamula 20-07-14
Nooca hawo-mareenka loo isticmaalo cuduro kaladuwan ayaa kala duwan. Guud ahaan marka lagu hadlayo, hawo-maareyn heer-sare ah oo heer-sare ah ayaa loo adeegsadaa bukaannada xanbaarsan; hawo-laba-heer hawo-mareenka ST ee cudurada sambabka. Haddii ay bukaanjiif adag tahay, waxaa laga yaabaa in loo baahdo ...
Farqiga u dhexeeya hawo-ku-dirirista hawada iyo hawo-mareenka aan gashaneyn
1. Laga soo bilaabo kala soocidda qaybaha maareynta aaladda caafimaadka, hawo-maareyaasha aan-ku-dirirka lahayn waxay ka tirsan yihiin qaybta labaad ee aaladaha caafimaadka, iyo hawo-maareyaasha af-duubista waxay ka tirsan yihiin qaybta saddexaad ee aaladaha caafimaadka (heerka ugu sarreeya qeybta saddexaad waxay u baahan tahay S ...
Xaqiiqdii ma u adeegsan doontaa hawo-mareenada dab-ku-dirirka ahayn ee guriga?
Hadda xaaladaha nololeed way wanaagsan yihiin, aalado caafimaad oo badan oo la xiriira, sida matoorrada oksijiyeyaasha iyo hawo-mareenada aan firfircoonayn, ayaa soo galay qoysaskeena, iyagoo u keenaya xaalado nololeed wanaagsan bukaanno badan. Marka, miyaad runtii u isticmaashaa hawo-mareen hawada kululayn? Aan qarsoodi ahayn ...
Ma Seexan Kartaa? Iskuday 5tan Trick
Celceliska qaangaarka ayaa u baahan 8 saacadood oo hurdo ah maalintii celcelis ahaan, aad iyo aad u yar ayaa saamayn ku yeelan doona caafimaadka jidhka. Xaqiiqdii, dad badan ayaa ka warqaba baahiyaha iyo qaababka hurdo-hurdo wanaagsan, laakiin way adag tahay in la fuliyo go aanka iyo waxqabadka ...
Mabda'a daweynta daweynta ee hawo-mareenada aan faafinaynin
Ka dib sanado badan oo xaqiijin caafimaad ah, daaweynta hawo-mareenka aan-baahinta laheyn ee hurdada xannuunka hurdada ayaa leh saameyn muuqata. Iyada oo ay ugu wacan tahay faa'iidooyinka aan-faafin, hufnaanta sare iyo badbaadada, daaweynta hawo-mareenka ayaa noqotay habka ugu waxtarka badan ee lagu daweeyo cudurka 'snor ...
Waa maxay Snoring？ Snoring waa cod weyn, sanqadha neefsashada culus ee culus inta aad hurudeyso. In kasta oo ay ku badan tahay ragga iyo dadka miisaanka culus, waa cudur guud oo ku dhaca qofkasta. Aflagaadadu way sii xumaan doontaa da'da. Nuugista hal mar in ka badan inta badan ma ahan pr ...
Waa maxay faa'iidooyinka hawo-mareenka aan caadiga ahayn ee ku-meel-gaarka ah ee loogu talagalay COPD?
Daaweynta hawo-qaadida cadaadiska cadaadiska ee aan-firfircoonayn ee COPD waxay nasiin kartaa murqaha neefsashada ee daalka dabadheeraad Daaweynta hawo qaadashada cadaadiska cadaadiska ee aan caadiga ahayn ee COPD waxay hagaajisaa shaqada sambabbada iyo gaaska, waxayna wanaajisaa tilmaamaha baaritaanka gaaska; Ku-dirir la’aan ...
Waa maxay sababta COPD loogu daaweeyo hawo fiican oo aan firfircoonayn?
Xilliga xasilloonida ee COPD: Wadamada Yurub iyo Mareykanka, sababtuna tahay heerka sare ee wacyiga bukaanka iyo garashada cudurka, heerka dhaqaalaha iyo nidaamka magdhowga ayaa ka sarreeya, daaweynta hawo-maareynta hawada ee aan caadiga ahayn ee qoysaska qaba COPD ayaa ...
Farqiga u dhexeeya hawo-mareenada hawada ku-faafin iyo Mashiinka Oxygen-ka
Waqtiga xaadirka, dabeyshayaasha guriga iyo matoorrada oksijiinku waa qalab caafimaad oo guryaha caan ka ah. Dad badan ayaa ku jahwareersan faraqa u dhexeeya hawo-mareenka iyo dhaliyaha oksijiinta. Waxay u tixgeliyaan hawo bixiyaha sida matoor oksijiin waxayna si qalad ah ugu fikiraan in d ...
Sidee si amaan ah loogu badbaadin karaa bukaannada qaba COPD?
Marka ugu horeysa, qof walbaa waa inuu fahmaa, waa maxay "sambabka oo gaabis ah"? Dad badan, "sanbabada oo gaabisa" sanqadha aan caadi aheyn, laakiin "laan gabow gaabis ah" iyo "sanbabbada hurudda" ayaa waxoogaa yaqaan qof kasta. Xaqiiqdii, "sambabka oo gaabis ah" waa "s ... jir
Daweynta sare ee dareeraha oksijiinta
Daaweynta oksijiinta qulqulka sare waxaa loola jeedaa habka loo bixiyo daaweynta qulqulka qumman ee bukaanka iyadoo la siinayo qulqulka qulqulka sare, feejignaanta saxda ah ee oksijiinta iyo diirinta iyo gaasaska hawo-qasan hawada. Waxay si dhakhso leh u wanaajin kartaa heerka oxygenation ee bukaanka waxayna ilaalin kartaa ...